Ahoana ny fomba hanakanana ny WhatsApp amin'ny alàlan'ny teny miafina | Androidsis
Eder Ferreño | | Huawei, fiarovana, WhatsApp
Manatrika ny fangatahana tonga any aminay Androidsis Amin'ny alàlan'ny mailaka, fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaogy na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy samihafa izay ananantsika kaonty mavitrika, androany dia tiako ny hanatontosa ity torolàlana tsotra ity izay natao ho an'ny tompon'ny terminal marika. Huawei ary mila hidio WhatsApp amin'ny alàlan'ny teny miafina hiarovana ny tsiambaratelo an'io fampiharana marefo io izay mety handany tsy fahafaham-po antsika mihoatra ny iray raha latsaka amin'ny tanana tsy tokony hianjera izy.
Na dia nifantoka tamin'ny tutorial aza aho ny Mihidy WhatsApp amin'ny alàlan'ny teny miafina Mba hiarovana ny fiainantsika manokana amin'ny prying maso, io fomba na torohevitra io dia azo atao ary tanteraka mifanaraka amin'ny fampiharana rehetra napetrakay amin'ny terminal Android misy ny marika Huawei, na ny rindranasa na ny rindranasa alaina.
Na dia ao amin'ny Google Play Store aza, ny fivarotana fampiharana Android dia ahitantsika rindranasa maimaimpoana marobe izay, amin'ny teoria, dia hanampy antsika hidio WhatsApp amin'ny alàlan'ny teny miafina, ny tena zava-misy madio sy mafy indrindra dia ny, farafaharatsiny ao amin'ny terminal marika Huawei toy ny Huawei P8 na Huawei P8 Lite, ireo rindranasa ireo dia tsy mandeha fotsiny na miasa mandritra ny segondra vitsy.
Raha ny tokony ho izy, ho anay mpampiasa terminal Huawei, dia tokony hanome antsika hitovy tanteraka izany, ary na dia tsy fantatry ny rehetra aza, ny faran'ny marika malaza fiaviana sinoa ity. Fampiharana feno hitantanana lafin-javatra samihafa ao amin'ny terminal anay dia apetraka ho fenitra, izay misy ny lakile tenimiafin'ny WhatsApp na ny rindranasa napetrakay amin'ny terminal Android anay.
Ny fampiharana apetraka, ilay asehoko anao eo ambonin'ireto tsipika ireto amin'ny pikantsary ary amin'ny horonan-tsary manazava feno etsy ambany izay anehoako anao ny fomba fampiasana azy, dia mamaly ny anaran'ny Mpitantana telefaona Ary, araka ny nolazaiko anao, tsy mila mitady azy io amin'ny efijery an-trano Huawei fotsiny isika hampandehanana azy, jereo ao anatin'ilay faritra Fanakanana ny fampiharana hiteraka tenimiafina fidirana izay hampiasaina hanatrarana ireo rindranasa izay nofidianay amin'ireo rehetra napetrakay tamin'ny fitaovana.
1 Lahatsary: ​​ny fomba fanakanana ny WhatsApp amin'ny teny miafin'ny fidirana
2 Ahoana ny fomba hampandehanana ny hidin-tanan'ny rantsantanana amin'ny WhatsApp
3 Fomba hafa hanakanana ny WhatsApp amin'ny Android raha tsy mametraka apps
Lahatsary: ​​ny fomba fanakanana ny WhatsApp amin'ny teny miafin'ny fidirana
Ahoana ny fomba hampandehanana ny hidin-tanan'ny rantsantanana amin'ny WhatsApp
Tsy ho ela dia ho afaka isika manidy sy mamoha WhatsApp amin'ny alàlan'ny dian-tananay. Izy ireo dia niasa tamin'ny fiasa nandritra ny fotoana kelikely ary efa jereo sahady amin'ny sasany amin'ireo biraony. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia mbola tsy misy daty ofisialy hanombohana amin'ny Android. Saingy tsy midika izany fa tsy afaka mampiasa an'ity rafitra ity isika. Satria azo atao izany, fa mampiasa fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo, izay tena mora ampiasaina ihany koa amin'ity tranga ity.
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'io lafiny io ny App Lock, na dia misy aza safidy isan-karazany misy amin'ny Android izay noresahinay. Izy rehetra dia manome antsika ny fahafahana manakana ny fampiharana amin'ny telefaona, ao anatin'izany ny WhatsApp, amin'ny dian-tananay. Avelany hanararaotra ny fakan-tsarin'ny finday noho izany izahay. Ankoatr'izay, ny fiasan'ny fampiharana dia tsotra be.
Mila misintona ny fampiharana amin'ny telefaona isika. Rehefa manokatra azy io isika dia hangataka antsika hiditra amin'ny PIN izay ahafahantsika miditra ao, izay avy amin'ny toerana ahafahantsika mifehy ny sisa amin'ireo rindranasa. Ao anatin'ny fampiharana no ahitanay ny lisitry ny rindranasa izay ananantsika amin'ny Android, ao anatin'izany ny WhatsApp. Mila fotsiny isika Atsimbadika ny switch ary midika izany fa azontsika atao ny manakana azy amin'ny alàlan'ny sensor sensor. Midika izany fa rehefa te hiditra amin'ny app isika dia tsy maintsy mampiasa ny sensor capres. Raha te haka ny App Lock dia mila tsindrio fotsiny ity rohy ity:
App Lock: dian-tànana ho teny miafina
Azo antoka fa tsy ho ela ny fahafaha-manao azy io amin'ny fanabeazana aizana amin'ny fampiharana mihitsy. Saingy hatramin'ny WhatsApp dia tsy nisy daty nomena an'izany momba izany.
Fomba hafa hanakanana ny WhatsApp amin'ny Android raha tsy mametraka apps
Mety te-ho afaka manakana ny WhatsApp amin'ny telefaona isika, hisorohana ny olon-kafa tsy hiditra amin'ny fampiharana. Amin'ity tranga ity, azontsika atao ny mampiasa ny toe-javatra misy ny telefaona. Marika maro amin'ny Android no manome antsika lahasa iray hanakanana ny fidirana amin'ireo rindranasa, hany ka voafetra ny fidiran'izy ireo. Raha te hanana fidirana amin'izy ireo dia mila mampiasa PIN, tenimiafinao na fomba fiarovana hafa ianao, izay miovaova isaky ny marika iray.
Araka ny efa nolazainay, marika marobe amin'ny Android no manolotra an'io safidy io, izay tsy maintsy arahantsika dingana vitsivitsy. Lazainay aminao izay tokony hatao raha ny marika tsirairay.
Sokafy ny toe-telefaona
Ampidiro ny fizarana Advanced Features
Tadiavo ny safidy Hidio ary afeno ny rindrambaiko ary ampidiro izany
Atsimbadika ny switch
Safidio ny fomba fanakanana hampiasaina
Safidio ny WhatsApp amin'ny lisitry ny fampiharana eo amin'ny efijery
Ampidiro ny fizarana antsoina hoe Security and privacy
Ampidiro ny safidy antsoina hoe App Lock na Application Lock
Ampandehano ny safidy
Ampidiro ny faritra tsiambaratelo
Midira amin'ny fizarana antsoina hoe Safidy manokana
Ampidino ny safidin'ny fampiharana tsirairay
Safidio ny WhatsApp ao anaty lisitra
Ampidiro ny toe-telefaona
Mandehana any amin'ny faritra Security sy ny dian-tanan-tànana
Ampidiro ny safidy antsoina hoe Block applications
Mitadiava WhatsApp ao anaty lisitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ahoana ny fanidiana WhatsApp amin'ny alàlan'ny teny miafina
Penelope dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ny info, nanampy be ahy io.
Valiny tamin'i Penelope
Raha manadino ny teny miafinao aho, ahoana no fomba hahitako azy, azafady mba ampio aho
[APK] Sintomy ny Sony Music Walkman ho an'ny terminal Android (kinova taloha)
Ho tonga tsy ho ela eny an-tsena ny Honor 20